Dive site Biaha Island, Bali, Indonesia " Journey-Assist - Diving
Pejy fandraisana » Eran-tany / Faritra » Asia » Indonezia » Bali » Toerana misitrika Nosy Biaha
Dive site Nosy Biaha (Gili Biaha)
Nosy Biaha (Gili Biaha)
Ity nosy kely ity dia miorina ao amin'ny Bay Amook any amin'ny morontsiraka atsimo atsinanan'i Bali. Amin'ny tsipika mivantana amin'ny Virgin Beach.
Biahu dia voahodidin'ny haran-dranomasina amin'ny lafiny rehetra. Betsaka ny karazana molotra sy trondro miaina any amin'ny rano manodidina ny nosy, ao anatin'izany ny tsy fahita firy. Ity no iray amin'ny antony itiavan'ny nosy mpitia antsitrika ity nosy ity.
Biaha no kely indrindra amin'ireo nosy kely ao amin'ny Bay Amook. 1 km fotsiny miala an'i Chandidasa. Ilay nosy dia toa vato lehibe eo afovoan'ny ranomasina, tototry ny ahitra sy kirihitra. Tsy honenana izy io, satria kely dia kely, ankoatr'izay, tsy misy loharano misy rano velona ao aminy. Tsy misy fotodrafitrasa ao Biahu koa.
Ny hany mampiavaka an'i nosy dia ny haran-dranomasina. Izy io dia manana fidinana mideza mankany amin'ny ranomasina amin'ny lafiny atsimo, fa ny fidinana kosa dia malama kokoa avy any avaratra. Ny rindrina dia rakotra terraces maro izay onenan-dranomasina, spaonjy sy lilia an-dranomasina.
Lava anaty rano lava
Eo amin'ny lafin'ny nosy misy ny ampahany misy azy, misy zohy anaty rano... Ao amin'ny halaliny no misy azy 12 m, voaaro amin'ny tondra-drano haingana ary onenan'ny antsantsa fotsy lehibe.
Mampiavaka ny tranokala fisitrihana Biach
Ny hafanan'ny rano - manomboka amin'ny +18 ka hatramin'ny +22.
Mahery na antonony ny fampianarana.
Avy amin'ny ranomasina irery ny fidirana.
Ny nosin'i Biahu dia nosasan'ny Lombok Current, izay mitondra plankton mankany amorony, ary koa atody trondro sy endasina. Noho io antony io dia samy hafa ny biby anaty rano ao amin'ny haran-dranomasina eo an-toerana. Eto ianao dia afaka mahita trondro lolo Meyer, trondro masoandro, nudibranchs isan-karazany, foza, losters, horita ary maro hafa. Dr.
Any atsinanan'i Bali (faritra Amlapura), mifanandrify amin'ny morontsiraka Fasika amoron-dranomasina fotsy / tora-pasika (tora-pasika virjiny)
adiresy: Gili Biaha 80851, Amlapura, Bali, Indonesia
mandrindra: -8.508516, 115.614452
Nosy Biach. Hizaha avy amin'ny cape akaiky indrindra
Toerana misitrika Nosy Biaha.
Toerana misitrika Nosy Biaha
Toerana misitrika Nosy Biaha. Fiainana anaty rano
Nosy Biach amin'ny sarintany
Nahita an'ity nosy ity aho avy teo amoron-dranomasina, ary tsy fantatro fa mahavariana izy io indraindray.
Ho fantatro. Raha azo atao dia tena hiezaka ny snorkel aho ao amin'ilay faritra, ary tsara ny torapasika any, ary mahaliana ny kapaoty amin'ny sary. Ka misy antony telo handehanana any.